किन हुन्छ डिप्रेशन? के हो यसको उपचार? – AB Sansar
November 25, 2020 santoshLeaveaComment on किन हुन्छ डिप्रेशन? के हो यसको उपचार?
डिप्रेसन कम कडा खालको मानसिक रोग हो। अर्को शब्दमा दिग्दारी रोग हो। सधैँ दिग्दार देखिने अर्थात् निराश देखिने रोग हो।अवस्था कस्तो खालको आएको छ दैनिक जीवनमा त्यसको आधारमा बिभिन्न अवस्थाबाट हाम्रो मन गुज्रिन्छ। तर, सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य मानिसमा कुनै फरक अवस्थामा मन यदी पुगेको छ भने लामो समयसम्म एउटै मनको अवस्थामा हामी कहिल्यै पनि बस्दैनौ।
यदि केही कारणले कोही दुःखी भएको छ भने केही समयपछि सामान्य अवस्थामा मन फर्किन्छ। मन आत्तिएको छ भने एकछिन मन आत्तिन्छ मन आत्तिएको कारण हटिसकेपछि केही समय बितेपछि आत्तिने समस्या आफैं ठिक हुन्छ। यो भनेको समान्य अवस्था हो।हाम्रो मन मस्तिष्कले हामीलाई सामान्य तरीकाले चलाइरहेको हुन्छ।
तर कहिले काही केही विशेष कारणले गर्दा मन यदि दुःखी भयो भने त्यही दुःखको अवस्था लामो समयसम्म रहिरहनुलाई हामीले डिप्रेशन भन्छौ।यदी मन दुःखी भयो उदास भयो भने केही समय फेरि त्यो मन फर्कीएर सामान्य अवस्थामा जानुपर्ने तर सामान्य अवस्थामा जादैन। दुई हप्तासम्म मन लगातार दुःखी र उदास भइरह्यो अरु लक्ष्यणहरु पनि आयो भने त्यसलाई डिप्रेशन भनिन्छ।
डिप्रेशन यही कारणले हुन्छ भनेर किटान गर्न त सकिदैन। तर यसका बिभिन्न कारणहरु हुन्छ।पहिलो कारण बंशाणुगत हो। यदी परिवारको बा, आमा, हजुरबा, हजुरआमा अथवा यो भन्दा पनि अघिको पुस्तालाई कुनै बेला डिप्रेशन भएको थियो भने डिप्रेशन हुनसक्छ।तनाव र जीवनमा घटेका केही घटनाको कारणले पनि डिप्रेशन हुन्छ।
केही रसायनीक परिवर्तनहरुको असन्तुलनको कारणले डिप्रेशन हुन्छ।कुनै पनि घटेका घट्ना दुर्घटना अथवा तनावको स्थितिलाई झेल्न सकियो भने डिप्रेशन हुँदैन तर त्यो तनावपूर्ण अवस्थालाई मानसिक रुपले झेल्न सकिएन भने डिप्रेशन उत्पन्न हुन्छ।
यो तीनवटा लक्ष्यणहरु कुनै शारीरिक रोगहरुले गर्दा भएको छैन भने त्यो डिप्रेशनको अवस्था हो।यसका अन्य लक्ष्यणहरु पनि छन्।
२० वर्षको अवधिमा ४ देखी ५ पटक सम्म डिप्रेशनले सताउन सक्छ।यदी उपचार गरिएन भने ६ देखि १३ महिनामा आफैं ठिक हुन्छ। उपचार गरियो भने २ देखि ३ महिनामा ठीक हुन्छ।
मानिसका अधिकांश रोगहरू गलत जीवनशैलीका कारण पैदा हुन्छन्। डिप्रेसन पनि एक यस्तै रोग हो। त्यसैले डिप्रेसनबाट बच्न दिनहुँ ध्यान, प्राणायाम तथा योगासन वा शारीरिक व्यायामहरू गर्नुहोस्, सात्विक भोजन गर्नुहोस्, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, चिन्ता होइन कि चिन्तन गर्नुहोस्। जीवनको बाटोमा आइलाग्ने समस्याहरूलाई एक—एक गरेर समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्।
मूलो कुरा जीवनको एउटा महान् लक्ष्य बनाउनुहोस्। त्यो किनभने ‘लक्ष्य’ भनेको जीवनको आधार हो। त्यसैले त मार्टिन लुथर किंग, जुनियरले एउटा अति नै मनोवैज्ञानिक उद्गार व्यक्त भनेका छन्– यदि मानिसले आफ्नो जीवनमा कुनै महान् उद्देश्यका लागि मरिमेट्ने संकल्प गर्दैन भने उसको जीवन नै बेकार हुन्छ। यहाँ मननयोग्य कुरा के भने मानिसलाई आफ्नो जीवन बेकार लाग्न थाल्यो भने नै डिप्रेसनले आक्रमण गर्छ।
संसारको सबैभन्दा खतरनाक रूख : झुक्किएर फलको टुक्रा चुसे मृत्यु, दाउरा बाले आँखा फुट्ने
बच्चालाई जन्म दिने बि’त्तिकै सं’सार छो’डिन आमाले, अब बच्चालाई काखमा लिएर कलेज पढाउन जान्छन् बुवा, भावुक बनाउने यी बाबुको कथा..
जिउँदो श्रीमानको मृ’त्यूदर्ता बनाएर श्रीमतिले गरिन सम्पति क’ब्जा
December 18, 2021 Ab - News